अफगानिस्तान कब्जा गरेको तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई किन गुहार्यो ? — Imandarmedia.com
अफगानिस्तान कब्जा गरेको तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई किन गुहार्यो ?
एजेन्सी। अफगानिस्तान कब्जा गरेको तालिबानले एकएक किन चाल्यो फेरि यस्तो कदम, विश्वभर बेग्लै तरंगकाठमाडौँ । तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई अफगानिस्तानमा आफ्नो सरकारलाई मान्यता दिन अपील गरेको छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यम सीजीटीएन टीभिलाई अन्तर्वार्ता दिँदै तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शहीनले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई तालिबानी सरकार स्वीकार गर्न अपील गरेका हुन् ।